My Analytics: Google Analytics for iPhone | Martech Zone
KISSmetrics dia namoaka fampiharana iPhone MAIMAIMPOANA antsoina hoe My Analytics. Io no fomba haingana indrindra hahitanao ny fahombiazan'ny metrikao Google Analytics rehefa lavitra ny latabatrao ianao.
My Analytics mampiseho ny angona Google Analytics rehefa mandeha ianao, mandritra ny fivoriana, na mila fanavaozana haingana.
miaraka My Analytics, azonao atao ny mampitaha ny angon-drakitra anio sy ny omaly, ny andro tamin'ny herinandro lasa teo, ary ny andro mitovy amin'ny tapa-bolana lasa izay. Azonao atao koa ny mampitaha ny angona omaly sy ny herinandro teo aloha na ny angona amin'ity herinandro ity amin'ny herinandro teo aloha.
My Analytics manome anao ny angona ilainao avy hatrany. Hiditra haingana amin'ny fitsidihanao ianao, mpitsidika tsy manam-paharoa, fomba fijerin'ny pejy, tanjona, fifanakalozana ara-barotra sy fidiram-bolan'ny ecommerce.
Orinasa lozisialy Malaysia
Wow, heveriko fa ity dia fampiharana tsara ho an'ireo mila fanavaozana haingana.